...tti maxxanfame 4:57 26 Sadaasa 20214:57 26 Sadaasa 2021
Jaalalli daa'imaafi jaldeessa hongeen haadha dhabee, namoota hedduu garaa nyaate
Jaalalli daa'ima ganna jahaa abbaa hin qabneefi jaldeessa sababa hongeetiin haadha isaa duuni jalaa fudhate namoota hedduu garaa nyaate.
...tti maxxanfame 4:55 21 Sadaasa 20214:55 21 Sadaasa 2021
Naannoo Oromiyaatti lammiileen miiliyoona lamaa ol sababa goginsaatiin miidhamuu naannichi beeksise. Goginsi kunis Godina Booranaa, Gujii, Harargee akkasumas Baaletti mul'achuun yaaddoo hawaasaa hammeesseera. Wanti Baaletti mudate maali?
...tti maxxanfame 7:40 14 Sadaasa 20217:40 14 Sadaasa 2021
Mariin jijjiirama qilleensaa waliigaltee haaraa hineegamne irra gahe
Mariin jijjirama qiileensaa Gilaasgoow keessatti gaggeeffamaa ture mormii daqiiqaawwan dhumaatiin booda cilee (coal) xiqqeessuu irratti waliigaltee irra gahe.
...tti maxxanfame 4:51 14 Sadaasa 20214:51 14 Sadaasa 2021
Addunyaan osoo guddattootaan hogganamte caalaa gaarii taatii laata?
Addunyaan teenya tun osoo shamarraniifi dargaggoo umurii dardaraa (teenagers)n hogganamtee maal fakkaatti laata?
...tti maxxanfame 7:01 11 Sadaasa 20217:01 11 Sadaasa 2021
Chaayinaafi US jijjiirama haala qilleensaarratti waliigaltee ajaa'iba jedhame tolfatan
Addunyaarratti biyyoonni lamaan CO2 gara qilleensaatti gadhiisuun faalama hunda caalaa qaqqabsiisaa jiran Chaayinaafi US kora dhimma jijjiirama haala qilleensaa, COP26, irratti akka waltumsan beeksisan.
...tti maxxanfame 5:01 6 Sadaasa 20215:01 6 Sadaasa 2021
Wantoota ajaa'ibsiisoo shanan jijjiirama qilleensaa irratti dhiibbaa fidan
Wantoota jijjiirama qilleensaa irratti dhiibbaa uuman keessaa kanneen hir’isuu qabnu beekna. Garuu wantoonni isin hin hubatiin muraasni jiraachuu malu. Isaan shanan kunooti.
...tti maxxanfame 8:27 4 Sadaasa 20218:27 4 Sadaasa 2021
Biyyootni 40 ol cilee fayyadamuu dhaabuuf waadaa seenan
Biyyoonni cilee haala olaanaa taheen fayyadaman kanneen akka Poolaand, Veetinaam fi Chiilii dabalatee kaanis waadaa warra seenan keessaati.
...tti maxxanfame 6:21 3 Sadaasa 20216:21 3 Sadaasa 2021
Dureessi addunyaa kanaa Beezos uumama bakkatti deebisuuf doolaara bln lama kenne
Dureessa addunyaa kanaa fi hundeessaan Amazon Jeef Bezoos imala dhiyeenya gara hawaatti taasisee deebi'een kaka'umsa horachuu kora dhimma jijjiirama haala qilleensaa COP26 irratti hime.
...tti maxxanfame 4:46 1 Sadaasa 20214:46 1 Sadaasa 2021
Jijjiiramni qilleensaa barbaadamummaa buna Itoophiyaa 'dabaluu mala'
Yaaddoo jabaa addunyaa kan ta'e jijjiiramni qilleensaa wantoota hedduu irratti dhiibbaa fidaa jira. Isaan keessaa tokko ammoo omisha Bunaati. Ta'us ammoo jijjiiramni qilleensaa barbaadamummaa buna Itoophiyaa dabaluutu himame. Kun attamiin laataa?
...tti maxxanfame 5:01 31 Onkololeessa 20215:01 31 Onkololeessa 2021
Saal-qunnamtii sirnakkoo waliin deemu maal, akkamiin faalama naankaluu xiqqeessa?
Qunnamtiin saalaa, jijjiirama qilleensaa fi dhiibbaa Sirnakkoo irratti fidu yaaddanii beektuu? Ofii qunnamtiin saalaa sirnakkoo wajjin deemu maali? Deebii isaa oddeessa kana keessaa ni argattu.